The Key Iji na-aga nke ọma Twitter Marketing Strategy - Omume Semalt
Twitter bụ ngwá ahịa ahịa SEO dị oké ọnụ ahịa maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze. Ọ bụla azụmahịa nwere ike irite uru na usoro nke ịmepụta ma na-arụ ọrụ nke ọma mgbasa ozi n'ịntanetị. Maka ọtụtụ ndị ọrụ, Twitter nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ nwee uru site na ndị ahịa ndị si na weebụ. Nik Chaykovskiy, Semalt Onye Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ihe Ndị Na-enye Aka, nyere ụzọ ndị a ga - esi nweta ihe kachasị na Twitter:
Jikọọ mkparịta ụka. Ịnweta mkparịta ụka ndị dị ugbu a nwere ike ịbụ ezigbo mgbanwe na atụmatụ Twitter gị. O kwere omume ịgụnye ọtụtụ ọdịnaya dị iche iche na ime ka ndị na-ege ntị soro na mgbasa ozi ahịa - cuts yag yakici. Akụkụ a na-enye aka na ogo nke ebe nrụọrụ weebụ gị na SERPs. Ị nwere ike ijide asọmpi ma nye gị mmeri. I nwekwara ike ịmepụta otu ụzọ, nke nwere ike ime ka ndị mmadụ nọ na niche gị na mkpokọta weebụ gị ruo ogologo oge.
Jiri vidio na ihe oyiyi. Vidiyo na foto mere usoro pụrụ iche ma nwee ọganihu nke ịnye ọdịnaya na onye ọrụ. Na Jenụwarị 2017, Google gbanwere ha Penguin Algorithm. Ụfọdụ mgbanwe ndị ndị mmadụ na-agụnye gụnyere iji ha dị ka ihe eji eme ihe, nke dị maka search engine nhazi. Ọzọkwa, ihe oyiyi na-enye aka na UX nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog, na-eme ka ọ bụrụ ọkwa.
Ụgha na-emekarị. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ mgbasa ozi na-ahọrọ ka ị na-agụ isiokwu ndị na-ewu ewu. ị ga - enwe ike ime mgbanwe dị ukwuu n'ahịa ahịa ị nwere ike ichebe ugbu a.
Retweet Njikere. Mpempe redio retweet nwere ike inye aka karịsịa mgbe ị na-agbalị ịnweta akwụkwọ ozi. Gbaa mbọ hụ na ihe nzaghachi ọ bụla nwere ihe ọkpụkpọ kwuru na ya. Ngbanwe a na-eme ka a kwụsị ọrụ niile na-eme ka ndị mmadụ na-emekọrịta ihe ndị ọzọ dị mkpa n'ime niche gị.
Chọpụta ụmụazụ gị bara uru Ọ bụghị onye ọ bụla ga-amasị gị ibe gị nwere ike ịgụ dịka onye ahịa. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị mmadụ na-achọta uru iji mee ka ndị ọrụ na-ejikọ na profaịlụ ha dị mkpa iji mee ka saịtị ahụ rute ihe mgbaru ọsọ onye ọrụ ahụ. Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ nwere ohere nke ịghọgharị ndị ahịa ngwa ngwa ma ndị ọzọ nwere ike iwepụta oge buru ibu.
Jikọta ndị na-ege ntị ziri ezi. Mgbe ị na-eme tweet, ọtụtụ ndị nwere ike iweghachi ma ọ bụ kwuo na tweet. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ na-arụ ọrụ ọtụtụ weebụsaịtị e-commerce nwere nsogbu na-ejikọta tonnes nke DM na-abịa site n'ọtụtụ akụkụ nke mgbasa ozi ahịa niile. Ọ dị mkpa ịzaghachi ndị na-ege ntị ziri ezi.
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ nwere ike isi mee ka usoro ahịa Twitter rụọ ọrụ nke ọma. Nke mbụ, mmadụ nwere ike izute ọtụtụ nsogbu mgbe ị na-eme SEO. N'ihi ya, webmasters na-ahọrọ itinye ụfọdụ n'ime usoro mgbasa ozi Social Media Marketing. Twitter nwere ike ịmezi ụfọdụ n'ime ụzọ ndị azụmahịa gị si azụ ahịa. N'otu ụzọ ahụ, enwere ike ịnwe akụkụ ndị ọzọ metụtara usoro tweeting na nke ndị mmadụ si enweta uru.